बीपीएलको पहिलो खेलमा सन्दीप मैदानमा उत्रिने सम्भावना कति ? - Sagarmatha TV
बीपीएलको पहिलो खेलमा सन्दीप मैदानमा उत्रिने सम्भावना कति ?
काठमाडौं । विग ब्यास लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर बंगलादेश पुगेका सन्दीप लामिछानेले आइतबार बंगलादेश प्रिमियर लिग खेल्दैछन । पहिलो पटक प्रतियोगतामा सहभागिता जनाउने तयारीमा रहेका सन्दीप पहिलो खेलमा नै टिममा संभावना अनुभवी लेग स्पिनर इमरान ताहिरका कारण ५०–५० प्रतिशत रहेको छ ।
बिग बासमा चार खेलमा आठ विकेट लिएर बंगलादेश उडेका सन्दीपको टिम सिलेट सिक्सर्सले आइतबार कोमीला भिक्टोरियन्ससँग खेल्नेछ । ढाकामा हुने यो खेल दिउसो सवा १२ बजेबाट शुरु हुनेछ । सन्दीपको पछिल्लो पटकका फर्मलाई बंगलादेशको भूमिमा पनि कायम राख्ने विश्वास सबैको रहेको छ । वकार युनिसको प्रशिक्षणमा रहेको सिलेट सिक्सर्सबाट सन्दीपले बीपीएल खेल्नछन ।
उनको टिममा विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी रहेका छन् । डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको सिलेटमा सन्दीप र वाट्सनबाहेक मोहम्मद इरफान, नबिल समद, इबादत होसेन, आलोक कपाली, जाकिर अलि, गुलाब्दिन नैब, आन्द्रे फेचर, मेहन्दी हसन रजा, पट ब्राउन, इमरान ताहिर, निकोलस पुरन, मोहम्मद नवाज नासिर होसेन, सब्बिर रहमान, सोहेल तनविर, लिटन दास, अफिफ हुसेन, तस्किन अहमद, अल अमीन होसेन, तोउहिद रिदोय, फेबियन एलेन रहेका छन ।
दोस्रो खेलमा पौष २५मा चिट्टगङ भाइकिङ्स विरूद्द प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । ७ वटा टिमहरुको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा चिट्गङ भाइकिङ्स, कोमिल्ला भिक्टोरियन्स, ढाका डाइनामाइट्स, खुलना टाइटान्स, राजसाही किङ्स, रङपुर राइडर्स, स्याल्हेट सिक्सर्स रहेका छन् ।